Weerarkii Xeebta Liido oo Lasoo Afjaray iyo Geerida oo Labaatameeyo sii Caga Cagaynaysa (VIDEO)
January 22, 2016 – Waxaa la soo af jaray Weerarakii Xalay maqribkii kadib ka bilaawday laba kamid Baararka ugu caansan ee ku yaal Xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada sida gaarka ah u tababarn ee Gaashaan ayaa waxay xalay xili dambe soo gaba gabeeyeen Weerarkii dagaalyahano hubeesan oo katirsan Ururka Al-Shabaab ku qaadeen Baararka Beach Vieuw iyo Liido Beach Sea Food.
Dagaalkan ayaa ka socday Dhismaha Baararka in ka badan 10-saacadood oo ugu dambeyn Ciidanka Gaashaan ay ku guuleesteen in ay soo afjaraan Weerarka, waxa ayna ciidanka wada dileen ragii weerarka soo qaaday.
Wasiirka Amniga gudaha C/Risaaq Cumar Maxamed ayaa xaqiijiyay in Ciidamada amaanka ay soo afjareen weerarkii Al-Sabaab ku qaadeen Baarka Liido Sea Food iyo Beach-Vieuw ee kuyaala xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho.
In ka badan 20-qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku geeriyoodeen weerarka lagu qaaday Xeebta Liido, waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay dad tiro badan, waxaana laga cabsi qabaa in qasaaraha uu intaasi kasii bato marka Baaritaanka goobahaasi uu bilaawdo.
Xafiiska Sawirro.com Muqdisho
January 31, 2016 tuugahaladilo2015
Dab Xoogan oo Maanta ka Kacay Kaalinta Shidaalka Isgoyska Banaadir (SAWIRRO) January 17, 2019